လွမ်းမပြေ သုတရပ်ဝန်း: Windows 8/ 8.1 မှာ Zawgyi Font ပေါ်အောင် လုပ်ချင်ရင်...
Saturday, August 31, 2013 Windows OS ဆိုင်ရာ
အခုကျွန်တော် Post တင်ခြင်တာကတော့ Windows 8 / 8.1 မှာ ဇော်ဂျီ Font ပေါ်အာင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ ဆိုတာကို ရေးချင်ပါတယ် အပေါ်ဟာကတော့ မလုပ်ခင်ဖြစ်ပြီး အောက်ပုံကတော့ လုပ်ပြီးတဲ့ ပုံဖြစ်ပါတယ်.
ကဲစလိုက်ရအော် Windows Key + R ကို နှိပ်လိုက်ပါ Run လေး ပေါ်လာပါလိမ့်မည်။ ဒါမှမဟုတ် Widows Search မှာလဲ Run လိုရိုက်ရှာပြီးတော့ ဖွင့်လို့လည်း ရပါတယ်။ Run ပေါ်လာရင်တော့ regedit လိုရေးပြီးတော့ Enter သိုမဟုတ် OK ကို နှိပ်လိုက်ပါ။
OK နှိပ်ပြီးရင်တော့ အောက်ပုံမှာ မြင်တဲ့အတိုင်း ပေါ်လာပါလိမ့်မည်။ ပေါ်လာရင်တော့..
HKEY_CURRENT_USER => Control Panel => Desktop => WindowsMetrics
ပြီးတော့ WindowsMetrics ကို Right-Click လုပ်ပြီးတော့ Export လေးကို နှိပ်ပေးလိုက်ပါ။
ပြီးရင်တော့ အောက်ပုံအတိုင်း ပေါ်လာပါလိမ့်မည်.. ပေါ်လာရင်တော့ နာမည်တစ်ခုခု ပေးပြီးတော့ Save လိုက်ပါ။
ပြီးရင်တော့ ဒီဟာလေးကို ဒေါင်းလိုက်ပါ ။ ဒေါင်းပြီးရင်တော့ Download ထားတဲ File ကို Right- Click လုပ်ပြီးတော့ Merge ကို Click ပေးလိုက်ပါ။ ပြီးရင်တော့ Yes !
နောက်ပြီးတော့ OK ပေးလိုက်ပါ
အားလုံးပြီးရင်တော့ Windows ကို Sign Out လုပ်ပေးလိုက်ပါ.. ပြီးရင်တော့ Windows မှာ ရှိတဲ့ဇော်ဂျီ စာလုံးတွေ ပ်ါလာပါတော့မည်။
Windows OS ဆိုင်ရာ,
ဆက်စပ်ဖတ်ရှုသင့်သော အကြောင်းအရာများ: Windows OS ဆိုင်ရာ
Windows 8/ 8.1 မှာ Zawgyi Font ပေါ်အောင် လုပ်ချင်ရ...
Pregnancy (hCG) ကိုယ်ဝန်ရှိ-မရှိစစ်တဲ့ ဟော်မုန်း (...
2013 BMW အမျိုးအစား တောင်တက်စက်ဘီး...
၂၀၁၃ ဈေးအကြီးဆုံး ကားများ...
USB Bottle Opener - PNY 32GB...
2013 ခုနှစ်အတွင်း လူကြိုက်များတဲ့ ထိပ်တန်းဝင် Smar...
iPhone သမားများအတွက် Charger... That's Funny...!
Canon EOS-1D X Review - 18 MP With CMOS EOS
Samsung NX2000 Review - Mirrorless Digital Camera
Fujifilm X-M1 Digital Camera Review - 16 MP
တရုတ်နိုင်ငံက Romantic Street Art...
Leica M-E Typ 220 Digital Camera Review...
Uterine Fibroid (2) သားအိမ်အလုံး (၂) (18+)
Myanmar APN (Beta) for Android....
Y300, G510, C8813, C8813D စတဲ့ ဖုန်းတွေကို code မ...
Myandroid v1.4 (Myanmar Android Service Tool)...
အခြေခံကွန်ပြူတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး လေ့လာချင်သူများအတွက် ...
MPT Service v1.0.2(မြန့်မာဆက်သွယ်ရေးဝန်ဆောင်မူ)......
Clean Disk Security....
ပန်းချီဆရာ Vivi Mack ရဲ့ အစားအသောက်တွေနဲ့ ဖန်တီးထာ...
၁၉၆၈ ခုနှစ် ဗီယက်နမ်စစ်ပွဲကာလအတွင်း အသုံးပြုခဲ့တဲ့...
ဖုန်းမလိုပဲ.. Gtalk & Facebook အကောင့်သစ်ဖွင့်နည်း...
Bagan Keyboard Pro Version 1.6.8 (Updated)...
Hepatitis Q and A အသဲရောင်ခြင်း အမး-အဖြေ
Samsung Galaxy S3 ကို ဖုန်းထဲကနေ Root လုပ်မယ်....
Samsung ဖုန်း ဘက်ထရီအား အကုန်မြန်နေသလား...
ဖုန်း Sim Card Lock ကျသွားရင်ဖြေရှင်းနည်း....
အလှအပအတွက် ခရမ်းချဉ်သီးကို ဘယ်လိုသုံးကြမလဲ…
UTI treatment ဆီးလမ်းကြောင်း ပိုးဝင်ခြင်းကို ဘယ်လိ...
Android Devices တွေကို Root ဖို့အတွက် UnlockRoot P...
Sex in Space (+18)
Are You Sexy? (+18)
GSM နှင့် WCDMA ဖုန်းများတွင် SMS စနစ်ဖြင့် အင်တာန...
Photoshop သမားများအတွက် အသင့်သုံး ဘွဲ့ဝတ်စုံလေးမျာ...
ဖူးစာရှင်ကို အွန်လိုင်းကနေ ရှာမယ်ဆိုရင်...အောင်ခမ်...
Printer များအကြောင်း တစေ့တစောင်း...
Huawei G610 Official Rom များစုစည်းမှု...
Huawei ဖုန်း Firmware တွေကို အလွယ်တကူရှာဖွေပေးမယ့်...
VIVI Cursor V2.0.2 Serial Keys...
Sexting: Teens & Adults X Rated Texts (+18)
Sex and Relationship (+18)
Vaginal infections မွေးလမ်းကြောင်း ပိုးဝင်ခြင်း
မက္ကဆီကိုမြောက်ပိုင်းမှာ မကြာသေးခင်က ရှာဖွေတွေ့ရှိခ...
Sex Education for All (+18)
Android ဖုန်းတွေအတွက် ထိပ်တန်းစာရင်းဝင် အခမဲ့ဂိမ်း...
Samsung Galaxy S3 (i9300)အတွက် မြန်မာစာမှန်တဲ့ Fir...
စွန့်ပစ်ထားတဲ့ ရေအောက် Strip Club ဟောင်းတစ်ခု...
ဘောလုံးချစ်သူများအတွက် HD Desktop Wallpapers...
ကိုယ်အလေးချိန်အများဆုံး မွေးကင်းစ ကလေးငယ်....
Top Paid7Android 3D Games Pack (Eng/31 July 2013...